WOWOW Pull Down Kitchen Faucet Miaraka amin'ny Magnet Chrome
Home / Fitaovana an-dakozia / Misintona Faucets / WOWOW Faucet an-dakozia tsara indrindra amin'ny Chrome Magnet
2311901C torolàlana fametrahana
Tazom-bidy any an-dakozia mitazona ny 2311901C
Reraka ve ianao fa mahatratra ny fetra voafetra ao amin'ny lakana an-dakozia? Aza misalasala, ary mividy avy hatrany vita amin'ny plcle de plastika an'ny WOWOW. Amin'ny alàlan'ny faucet tokana an'ny WOWOW dia ahafahanao manitatra mora kokoa anao, ary mety ho tonga any amin'ny toerana rehetra ianao na manodidina ny fandroana an-dakozia. Indrindra rehefa ny lakozian-tsolika anao dia misy lakozia roa vita amin'ny lakozia, ny goavam-bolan'ny gropy WOWOW dia tena mahomby. Miaraka amin'ny lohamilina 360 degre mora ampiasaina, dia manana fahafaha-farany farany tianao ianao. Tsy hisy na aiza na aiza izay tsy ahafahanao mitaona amin'ny lakozia gropy iray an'ny WOWOW.
Miaraka amin'ny doka mahery vaika anananao dia azonao tsofina mora ilay mpanenona an-dakozia ao amin'ilay mazoto mahery. Amin'izany fomba izany ny mpanaparitaka an-dakozia dia ho eo amin'ny toerany ary tsy milentika rehefa mandeha ny fotoana toy ny faucet an-dakozia. Ny fehin-tsiro vita amin'ny lakozia any WOWOW dia tsy handiso fanantenana anao mihitsy. Ity fiasa maoderina ity dia hisoroka ny lohan-droronoo tsy ho latsaka na hikoropaka. Ny endri-javatra mampiavaka an'ny famoronana plastika an'ny WOWOW an-dakozia dia nosedraina imbetsaka in-10,000. Ny mazoto vita namboarina dia nahavita nanohitra ireo fitsapana rehetra ireo, ary na dia afaka 10,000 fotoana aza dia afaka nanamboatra tsara ny làm-po izy ireo ary avy eo aorian'ny fisintomana azy. Azonao antoka fa manana kalitao matanjaka izay mety tsara ao an-trano sy amin'ny toeram-pivarotana.
Tazom-baravarankely vita amin'ny lakozia misy fiasana samihafa
Ny an-dakozia faucet tokana WOWOW ankoatra ny dia manolotra anao fiasa isan-karazany. Miaraka amin'ny fiasan'ny rano telo dia afaka misafidy ny fampiasa rano manokana izay manompo anao tsara indrindra amin'ny asa an-dakozia izay ataonao. Azonao atao ny misafidy moramora ny fiasa ilainao miaraka amin'ny bokotra eo amin'ny lohan'ny spray any an-dakozia faucet tokana. Azonao atao ny misafidy ny làlan-kafe mahazatra mba hamenoana ny tananao ny rano ao anaty vilany, na ny fomba famafazana mba hanasa ny legioma. Ny maody aqua-blade tokana dia misy hery mahery vaika handrahoana vilia maloto sy lakozia maloto haingana sy mahomby.
Ho toekarena amin'ny volavolan-kavananao, ny Neoperl ABS no mpanamboatra dia mamonjy manodidina ny 50% amin'ny rano. Ho hitanao mafy ny fihenan'ny rano mihena noho io endri-javatra vaovao io. Fa farafaharatsiny azonao antoka fa tsy mandany rano ianao. Ny aoteravy dia afaka esorina mora foana amin'ny kitapom-bola mba hanadio ny ampaham-bokatra any an-dakozia, na na hisolo izany. Ny fehin-kiraro faucet tokana dia mety ho mandeha tsara tsy misy ny Neoperl ABS aerator, ka raha tsy matoky azy ianao dia mampiasa, dia azonao atao ny manala azy amin'ny famoahana tokana grcet tokana.
Toeram-pisakafoanana vita amin'ny lakozia avo lenta
Ny kalitao azonao amin'ny volanao dia mahavariana. Ny ankamaroan'ny mpanjifa dia tsy nanantena ny kalitao mifandraika amin'ny vidin'ity famoahana plc an-dakozia ity. Noho izany, afaka milaza marina izahay fa tsy mirehareha fa ny lakilen-tsika famantaran-tsoavaly dia manolotra anao ny sarobidy indrindra ho an'ny vola azonao amin'ny tsena. Tsikaritrareo avy hatrany ny kalitaon'ity grika voaravaka famatsiana lakana ity rehefa mitazona azy. Ny hasaroban'ny grc an-dakozia dia manambara ny vy matevina vita avy aminy.
Ny vatan'ny faucet ao an-dakozia dia vita amin'ny firaka zinc mba hiantohana fiaretana lava, miaraka amin'ny vovon-tsakafo ao an-dakozia izay vita amin'ny varahina. Ankoatr'izay, ny spout faucet ao an-dakozia dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony mba hanolotra anao fitaovana lakozia tsy mitete sy tsy mitarika. Ny fantsom-pivoahana dia vita amin'ny akora fanoherana mahery vaika, ary ny tsipika famatsian-drano Tucai - miaraka amin'ny fiantohana fiantohana manerantany - dia misy fantsom-by tsy misy vy. Tsy ho an'ny tsy misy na inona na inona WOWOW dia manana mpanjifa manerantany maro izay mijanona ho mpanjifa mahatoky mandrakizay, satria hiverina hividy faucet an-dakozia WOWOW miaraka amin'ny fanavaozana ny lakozia manaraka izy ireo.
Fametrahana kiraro plastika kely vita amin'ny lakozia
Rehefa misafidy birao faucet tokana ianao mitambatra miaraka amin'ny lakozia vaovao novolavolaina, matetika no mety napetraka tao anatin'ny minitra iray amin'ny fametrahana ny lakozia anao tsy misy vidiny fanampiny. Na izany aza, raha te-hanavao ny lakozia ianao miaraka amin'ny famahana an-dakozia vita amin'ny lakozia io, dia misy olona mamela ny tenany hijanona satria manantena izy ireo fa misy hazo lehibe iray voatery antsoina hoe hametraka io lakozia io. Na izany aza, WOWOW dia nanamora ny fametrahana an'ity lakozia faucet tokana ity mba hahafahanao manao izany. Tsy mila manakarama plastika lafo ianao ary afaka 30 minitra fotsiny dia azonao atao ny manolo ny grosinao an-dakozia taloha miaraka amin'ny marika io goavam-be zorony vaovao amin'ny WOWOW io.
Gaga ny mpanjifa noho ny fahatsorana ny fametrahana an'ity lakilasy fanamainty ity. WOWOW dia nahavita nanamboatra izany mora, tamin'ny fomba izay ahafahan'ny olona mametraka an'ity lakozia vita amin'ny plène iray ity ao anatin'ny 30 minitra. Ny faucte an-dakozia dia natao tamin'ny fomba iray izay tena samihafa amin'ny gros misy an-dakozia hafa. Mandeha izy io raha tsy milaza fa ny fametrahana fitaovana rehetra dia misy miaraka amin'ny famahana an-dakozia faucet tokana.
Sandoka tokana menaka lafo vidy tokana
Misy goucet escutcheon azo ampiasaina ho an'ny fametrahana 1- na 3-hole. Amin'izany fomba izany dia tsy ho avelanao misy lavaka ratsy ianao ao amin'ny counter counter ao an-dakozia rehefa avy mametraka azy. Hapetraka am-pilaminana avokoa ny zava-drehetra mba hanomezana anao ny estetika tsara indrindra. Mba hametrahana ny tenanao any an-dakozia, ny kitapo fametrahana dia tafiditra ao amin'ny vokatrao, ary miaraka amin'ilay horonantsary fametrahana dia hatao ao anaty maso maso fotsiny ny fametrahana.
Raha ny talenta an-dakozia WOWOW dia manolotra kalitao lafo vidy sy endrika maoderina, ianao dia nahita ilay fantsom-bidy tokana iray izay notadiavinao. Ity goavam-baravarankely iray amin'ny lakozia ity dia azo antoka fa ny vidiny tsara indrindra amin'ny vola hitanao eo an-tsena. Miaraka amin'ny vanimpotoana 5 taona sy antoka-miverina amin'ny 90 andro azonao atao ny mividy mofomamy goavam-bola tokana an'ny WOWOW tsy misy atahorana. Dia inona no miandry anao?
Ny tombony azo avy amin'ny lakozia grika iray mitazona amin'ny fomba fohy:
· Manintona ny loham-baravarana Magnetika
· Fahatrarana 360 degre
· Fampisehoana lehibe
· Vita amin'ny metaly mivaingana avo lenta
SKU: 2311901C Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Misintona Faucets Tags: Fitaovana savoka an-dakozia, Stainless Resist, Inôksa
21.7 X 11.2 X 2.8 santimetatra